Xaflad soo dhaweyn ah oo loo sameeyey Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha XFS - Jowhar somali news leader
Home NEWS Xaflad soo dhaweyn ah oo loo sameeyey Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha XFS
Xaflad soo dhaweyn ah oo loo sameeyey Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha XFS
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha XFS Mudane Khaliif Cabdi Cumar ayaa waxaa loo sameeyey Xaflad soo dhaweyn ah, waxaana ka soo qeybgalay Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka, Siyaasiyiin, Ganacsato, Ururada Dhalinyarada, Ururada Haweenka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Ugu horeyn waxaa ka hadlay Xafladda soo dhaweynta Prof Maxamed Cali Ibraahim oo ku dheeraaday kartida, Aqoonta iyo Waayo aragnimada uu leeyahay Wasiir Khaliif Cabdi Cumar, waxa uuna u rajeeyey in uu Xilka Rabi u fududeeyo.
Xildhibaam Maryan Haaruun oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bogaadisay xilka loo dhiibay, waxa ayna kula dardaarantay in uu wax ka qabto dhibaatooyinka ka jira Arrimaha ganacsiga.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa ugu danbeyn ka Mahad celiyey xafladda soo dhaweynta ee loo sameeyey waxa uuna ballan qaaday in si hufnaan leh in uu u gudandoono waajibaadkiisa shaqo ee saaran.
Xafladdaan waxaa soo agaaasimay soona qabanqaabiyey Ganacsato, Dhalinyarada Aqoonyahanada waxa ayna ugu talagaleen in ay muujiyaan Taageerada ay u hayaan Wasiir/Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar.
soo dhoweynta wasiirka ganacsiga
Previous articleUS voters face intimidation ahead of presidential election of caravans, armed militias, rallies
Next articleUS presidential election: ‘A lot of angry people regardless of the result’